Lope de Vega. Makore makumi mashanu nemashanu mushure mekuzvarwa kwake. Mitsara makumi maviri uye mamwe mavhesi | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nhetembo, Theater
Felix Lope de Vega (1562-1635) yaive mumwe wevanonyanya kukosha vadetembi nevanyori vekutamba veSpanish Golden Age. Kungosangana Makore 455 kubva paakazvarwa uye zvinofanirwa kukosha kuyeuka asi, pamusoro pazvose, kuriverenga.
Mabasa ake asingaverengeki. Mazana mazana ema comedies, mamwe ma 3.000 neti uye nano nhatu kana epiki epics, pakati pevamwe. Fuenteovejuna, Peribáñez uye Mutungamiriri weOcaña, Knight weOlmedo, Mukadzi akapusa, Chirango chisina kutsiva, Imbwa iri muchidyiro., Kutaura vashoma, ndivo vaizove vane mukurumbira uye vanomiririrwa.
Lope aibva kumhuri inozvininipisa, asi hupenyu hwake hwakange hwazara nekunyanyisa uye zvido. Avo vaigara zvakanyanya vaive kunyora nevakadzi. Akaroora kaviri uye aive nevatanhatu vanozivikanwa vadikani vaakabereka navo vana gumi nevana. Akafa muna 1635 aine makore makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa uye akavigwa pamwe neese makwikwi uye mukurumbira weiye mukurusa. Asi zvirokwazvo nhaka yake muunyanzvi haifi. Rarama zvakare nguva dzese dzatinoverenga.
Kuda haisi sarudzo nekuti inofanirwa kunge iri tsaona.
Kana vanhu vakashungurudzika vakatsamwa, uye vakasarudza, havazombodzoka vasina ropa kana kutsiva.
Handizive kuti kune mazwi pasi pano anoshanda kana vatauri vane hunyanzvi semisodzi.
Godo vana verudo, asi ivo vana vehupombwe, ndinobvuma.
Mutauro wechiCastilian waisada kuti kubva pakuroora kusvika pakuneta paizove neanopfuura tsamba imwe yemusiyano.
Midzi yezvishuwo zvese rudo. Kusuruvara, mufaro, mufaro uye kuora moyo zvakazvarwa kubva kwaari.
Chii chimwe chinouraya kumirira zvakanaka zvazvinotora
kutambura zvakaipa zvauinazvo kare.
Zvinomanikidzwa kutaura kune yakashata nenzira yeupenzi yekuvafadza.
Hapana mazwi munyika anoshanda zvakadaro kana vatauri vane hunyanzvi semisodzi.
Kuti chiuru chezvinhu zvakanaka zvinodzidziswa kubva kumukadzi akanaka.
Mwari ndinunurei kubva kuvengana kweshamwari!
Iko kune rudo hakuna ishe, iro rudo rwakaenzana nezvose.
Tariro yangu yakafamba nemhepo;
gungwa rakamuregerera, chiteshi chakamuuraya.
Nhetembo kupenda kwenzeve, senge kupenda nhetembo yemeso.
Izvo zvakakosha haisi mangwana, asi nhasi. Nhasi tiri pano, mangwana pamwe, tichava tisisipo.
Kuti hapana mushonga wekukanganwa rudo
seimwe rudo rutsva, kana nyika pakati.
Iyo yakawedzera waini, yaipisa zvakanyanya: zvinopesana nehunhu hwedu, iyo yakareba yainorarama, inotonhorera iyo yainowana.
Asi hupenyu hupfupi: kurarama, zvese zvinoshaikwa; kufa, zvese zvasara.
Iko hakuna kunakidzwa kusingarwadzi semiganhu yayo; kuti nezuva riri iro rakanyanya kunaka uye rinonakidza chinhu, husiku hunopedzisira hwave nahwo.
Ini handizive chikonzero chechikonzero icho chikonzero changu chinoshungurudza.
Mavhesi erudo, mazano akapararira,
ndakaberekwa nomweya uri mandiri,
kununurwa kwepfungwa dzangu dzinopisa,
akazvarwa aine kurwadziwa kupfuura rusununguko;
foundlings kune nyika, mune iyo yakarasika,
wakatyoka iwe ukafamba ukachinja,
uko chete kwawakaberekwa
Ndinoenda kune ndoga,
Ndinobva kusurukirwa kwangu,
nekuti kufamba neni
pfungwa dzangu dzakandikwanira.
Handizive kuti kumusha kunei
kwandinogara uye kwandinofira,
pane kubva kwandiri,
Ini handikwanise kuenda kumberi.
Nezve nhetembo yake yechitendero isu hatigone kukanganwa izvi:
Ndiani iyeye jinda
kukuvadzwa nezvikamu zvakawanda,
izvo zviri kupera zvakanyanya padyo,
uye hapana anomubatsira?
"Jesus Nazareno" anodaro
iro rinoshamisa zita.
O mwari, izita rinotapira sei
haivimbise kufa kune mukurumbira!
Chii chandinacho, kuti iwe utsvage hushamwari hwangu?
kuti pamusuwo wangu, wakafukidzwa nedova,
Uye pamwe yakanakisa yerudo sonnet mumabhuku echiSpanish:
Kufenda, kutsunga, kutsamwa,
yakaoma, nyoro, yakasununguka, isinganzwisisike,
kukurudzirwa, kufa, kufa, mupenyu,
akavimbika, mutengesi, gwara uye mweya;
usawane kunze kwenzvimbo yakanaka uye zororo,
fara, shungu, kuzvininipisa, kuzvikudza,
vakatsamwa, vakashinga, vanotiza,
kugutsikana, kugumburwa, kunyumwa;
tiza kumeso kune kuora mwoyo kwakajeka,
inwa muchetura ne süave doro,
kanganwa kubatsirwa, ida zvakaipa;
tenda kuti denga rinokwana mugehena,
ipa mweya nomweya kuora mwoyo;
Urwu ndirwo rudo, chero munhu akaravira anozviziva.
Uye izvi, zvinonyanya kuzivikanwa:
Sonnet inondiudza kuti ndiite Violante
kuti muhupenyu hwangu ndakazviona ndiri mumatambudziko akawanda;
ndima gumi nemana dzinoti iyo sonnet;
kuseka, kuseka, vatatu vanoenderera mberi.
Ndakafunga kuti handina kuwana konsonendi
uye ndiri pakati peimwe quartet;
asi kana ndikazviona ndiri mutatu yekutanga,
hapana chinhu muquartet chinondityisa.
Kune matatu matatu andiri kupinda,
uye zvinoita sekunge ndakapinda netsoka yekurudyi,
Zvakanaka, pedza nendima iyi yandiri kupa.
Ini ndatove mune yechipiri, uye ini ndichiri kufungidzira
kuti ndiri kupedzisa ndima gumi nenhatu;
kuverenga kana pane gumi nemana, uye zvinoitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Lope de Vega. Makore makumi mashanu nemashanu mushure mekuzvarwa kwake. Mitsara makumi maviri uye mamwe mavhesi